Zvinopiwa zvepaTemberi; Arosi yemuBhaibheri | Waizviziva Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Arosi yaishandiswa munguva dzinotaurwa muBhaibheri yaiva chii?
Arosi yaibva pamuti unonzi muAgarwood
Bhaibheri rinotaura kuti arosi yaishandiswa kuita kuti nguo nemibhedha zvinhuwirire. (Pisarema 45:8; Zvirevo 7:17; Rwiyo rwaSoromoni 4:14) Arosi yomuBhaibheri inofanira kunge yaibva pamuti unonzi muAgarwood (wemhando yeAquilaria). Muti wacho sezvaunoora, unobudisa mafuta anonhuwirira uye muto unonama. Muti uyu waikuyiwa kuita upfu, wozotengeswa se“arosi.”
Bhaibheri rinofananidza matende evaIsraeri ne“miarosi yakadyarwa naJehovha.” (Numeri 24:5, 6) Izvi zvinogona kunge zvichireva zvakaita muti wemuAgarwood uyo unoreba mamita anoda kusvika 30 uye une mapazi anokura achibuda kunze. Kunyange zvazvo muti uyu usisawanike munyika yeIsrael, duramazwi rinonzi A Dictionary of the Bible rinoti, “hapana chinoratidza kuti muti uyu nemimwe isisazivikanwe haina kumbobvira yadyarwa muMupata waJodhani waiva wakapfuma uye waiva nevagari vakawanda.”
Ndezvipi zvinopiwa zvaigamuchirwa patemberi muJerusarema?
Chisimbiso chevhu ichi chiri mutemberi iri muJerusarema chava nemakore anenge 2 000
Mutemo waMwari waiti zvinopiwa zvose zvepatemberi zvaifanira kunge zvakanakisisa. Mwari aisazogamuchira zvinopiwa zvakaremara. (Eksodho 23:19; Revhitiko 22:21-24) Maererano nemumwe munyori akararama makore anenge 1 900 akapfuura, anonzi Philo, vapristi vepanguva iyoyo ndivo vainyatsoongorora mhuka “kubvira kumusoro kusvika kutsoka” kuti vave nechokwadi kuti dzainge dzakanyatsonaka uye “dzisina kuremara.”
Muzvinadzidzo E. P. Sanders akanyora kuti zvichida vapristi vepatemberi “vaibvumidza vatengesi vavaivimba navo kuti vangotengesa mhuka neshiri dzavainge vamboongorora. Saka, mutengesi aifanira kupa anenge atenga chimwe chinhu chavaishandisa serisiti chairatidza kuti mhuka yacho haina kuremara.”
Muna 2011, vanochera matongo vakawana karisiti kakadaro pedyo netemberi. Karisiti kevhu aka kakaenzana nemari yesimbi kairatidza kuti kanenge kemakore ari pakati pa100 B.C.E. na70 C.E. Mashoko maviri echiAramaiki aiva pakarisiti kacho akashandurwa nevanochera matongo kuti “Chakachena kuti chipiwe Mwari.” Zvinofungidzirwa kuti vakuru vakuru vepatemberi ndivo vainamirira karisiti aka pane zvimwe zvaishandiswa patemberi kana kuti pamhuka dzaizopiwa sezvibayiro.
Waizviziva Here?—February 2014